ဗိုက်အောင့်သက်သာစေသောဆေးများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာ » ဗိုက်အောင့်သက်သာစေသောဆေးများ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဗိုက်အောင့်၊ ဗိုက်နာခြင်းတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အက်စစ်ပြန်ဆန်တက်ခြင်း၊ ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊ အစာအိမ်ကြွက်သားများကျုံ့ခြင်း၊ အနာပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့် အစာအိမ်နာခြင်းများဖြစ်ရတယ်။ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ကုသမှုတွေကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။
အက်စစ်ပြန်ဆန်တက်ခြင်းအတွက် အစာအိမ်အက်စစ်ကိုလျှော့ချပေးသောဆေးများ၊ အစာမျိုပြွန်ရှုံ့ကြွက်သားသန်မာစေသောဆေးများ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အလွယ်တကူဆေးဆိုင်များမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး simethicone ပါသောဆေးများမှာ လေထခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။
အက်စစ်လျော့စေသောဆေးများမှာလည်း H-2-receptor blocker လို့ခေါ်ပြီး အလွယ်တကူဝယ်ယူမှီဝဲနိုင်ပါတယ်။ cimetidine (Tagamet HB®), famotidine (Pepcid AC®), nizatidine (Axid AR®), ranitidine (Zantac 75®). တို့ပါဝင်တယ်။ ပိုပြင်းသောဆေးများကိုတော့ ဆရာဝန်အညွှန်းနဲ့မှီဝဲရပါမယ်။
Proton Pump Inhibitor ဆိုသောဆေးများမှာလည်း အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချပေးပြီး lansoprazole (Prevacid®) , omeprazole (Prilosec®)တို့ပါဝင်တယ်။
Prokinetic agents ပါသောဆေးတွေက အက်စစ်ပြန်ဆန်တက်ခြင်းကြောင့်ရသော ဗိုက်အောင့်ခြင်းကို အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုမြန်စေခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါတယ်။ အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုမြန်ခြင်းကြောင့် အစာများအစာအိမ်ထဲတွင်နေသောအချိန်တိုပြီး အစာအိမ်နာကျင်ခြင်းသက်သာစေတယ်။ ဆရာဝန်များက metoclopramide (Reglan®)ဆေးညွှန်းနိုင်ပြီး ထိုဆေးဟာလူတိုင်းအတွက်တော့ အာနိသင်မရှိဘဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
၀မ်းပျော့ဆေးတွေဟာ ၀မ်းသွားရာမှာခြောက်သွေ့မှုကင်းပြီး စွန့်ရလွယ်ရန်အရည်ဓာတ်ပိုပါအောင်ကူညီပါတယ်။ ထိုနည်းကိုအစိုင်အခဲဖြစ်ပေါ်စေသောဝမ်းပျော့စေနည်းလို့ခေါ်တယ်။
အသုံးများသောဝမ်းပျော့ဆေးကတော့ ispaghula husk, methylcellulose, sterculia တို့ဖြစ်တယ်။ ထိုဆေးကိုသောက်ပါက အရည်များများသောက်သင့်ပြီး အိပ်ရာဝင်ခါနီးဆေးမသောက်ပါနဲ့၊ အာနိသင်ပြဖို့ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်ခန့်ကြာပါလိမ့်မယ်။
တခြားနည်းလမ်းကတော့ osmotic နည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ အညစ်အကြေးများမှာအရည်များမပါစေဘဲ၊ အူလမ်းကြောင်းမှာ အရည်ဓာတ်များစေသောနည်းဖြစ်တယ်။ ထိုနည်းဖြင့်မစင်များကိုပျော့သွားစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှစွန့်ထုတ်ရလွယ်စေပါတယ်။ အထက်နည်းလမ်းအဆင်မပြေပါက ထိုနည်းလမ်းသုံးလေ့ရှိတယ်။
အသုံးများသောဆေးတွေကတော့ lactulose, macrogols တို့ဖြစ်ပြီး ရေအလုံအလောက်သောက်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ အာနိသင်ပြဖို့ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်လောက်လိုနိုင်တယ်။
တချို့အူကြွက်သားများအားနည်းခြင်းကြောင့် ၀မ်းသွားရာမှာ အခက်အခဲရှိတတ်ကြပါတယ်။ ၀မ်းအနေအထားကောင်းနေရင်တောင်မှ အူလှုပ်ရှားမှုရိဖို့လိုပါတယ်။ အစာခြေစနစ်တွင်ရှိသော ကြွက်သားများကိုလှုံ့ဆော်ပြီး အညစ်အကြေးများကို ရွေ့လျားအောင်ကူညီပေးပါတယ်။
အသုံးများသောဆေးတွေကတော့- senna, bisacodyl, sodium picosulphate တို့ဖြစ်တယ်။ ၆ နာရီမှ ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ အာနိသင်ပြပါတယ်။
အစာအိမ်အနာတွေဟာ များသောအားဖြင့် H. pylori ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ပြီး မိမိဖာသာသောက်ဆေးများဖြင့် မသက်သာဘဲ H. pylori ကြောင့်ဟုထင်သောအခါ ဆရာဝန်ပြဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။
Antacid – အစာအိမ်အတွင်းရှိ အက်စစ်များကို ချေဖျက်ပြီးး နာကျင်မှုသက်သာစေတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ antacid တွေဟာ နာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်ပေမယ့် အစာအိမ်အနာကိုတော့မကုနိုင်ပါဘူး။
Acid blockers or histamine blockers – အစာအိမ်ရှိ histamine လက်ခံသောပစ္စည်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် အက်စစ်ပမာဏကျစေတယ်။ ranitidine (Zantac®), famotidine (Pepcid®), cimetidine (Tagamet®) , nizatidine (Axid®) စတဲ့ ဆေးတွေပါတတ်ပါတယ်။
Proton pump inhibitors – proton pump ကိုပိတ်ခြင်းဖြင့် အက်စစ်ထုတ်ခြင်းလျော့စေတယ်။ omeprazole (Prilosec®), lansoprazole (Prevacid®), rabeprazole (Aciphex®), esomeprazole (Nexium®) and pantoprazole (Protonix®တို့ ပါပါတယ်။
အစာအိမ်နဲ့ အူနံရံအားကောင်းစေသောဆေးများ – cytoprotective agents များဟုခေါ်ပြီး အစာအိမ်နဲ့ အူကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ sucralfate (Carafate®) or bismuth subsalicylate (Pepto-Bismol®). စသည်ဖြင့် ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အစာအိမ်အနာဟာ H.pylori ကြောင့်ဖြစ်ပါက အထက်ပါဆေးများအပြင် ပဋိဇီဝဆေးများပါသောက်သင့်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ရန်အချိန်မှာ ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်ထိကြာနိုင်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားရှိနေသေးပါက ဆက်သောက်ရပါမယ်။
ထိုဆေးများကိုသုံးစွဲရန်၊ မှန်ကန်သောပမာဏ၊ အချိန်၊ ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် တခြားသောဆေးများနှင့်ဓာတ်ပြုမှုများအကြောင်းသိရန် ဆရာဝန်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတျ 9, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတျ 9, 2018
ရင်ပူတာကို သက်သာစေဖို့ အစားအသောက်၊အနေအထိုင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
အစာမကြေခြင်းရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာများ